Izixhobo zeKhaya eziSmart- Iingcebiso kumadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Izixhobo zasekhaya ezi-Smart
Itekhnoloji enobuchule ifikile kumakhaya ethu. Yindlela yokuphila kwimeko enenzuzo engcono yokuziqhelanisa nekamva elitsha. Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo zasekhaya ezikrelekrele ezinceda ukuseka intuthuzelo enkulu ekhayeni lethu kunye nokunxibelelana nehlabathi elingaphandle, ke ngoko, beza ngokuzimisela nangakumbi ukuhlala emakhayeni ethu.
I-Intanethi yenza ubomi bube lula kuthi kuzo zonke iinkalo, ingene kuwo onke amajelo eendaba nakwizixhobo zasekhaya. Ngale ndlela ilawulwa ngakumbi, ikhululekile kwaye irobhothi Iya kusenza sizive singakhathali kwimisebenzi eyahlukeneyo kwaye sizithembe ngakumbi.
1 Izixhobo zasekhaya ezi-Smart
1.1 I-Amazon Echo Dot, sisixhobo esihle
1.2 Izixhobo ezifanelekileyo
1.3 Iimveliso zasekhaya
Zininzi kwaye zahlukile izixhobo zekhaya ezi-smart. Abanye basebenza ngokukodwa kwaye inye kuphela, eyona iphambili, enje ngeKhaya likaGoogle, iEcho yeAmazon okanye iApple's Siri ngabancedisi abaphambili bazo zonke ezinye iimveliso eziza kusebenza. Baya kuba nakho ukulawula kunye nabanye ngokusebenzisa i-interface Ukuze zonke izixhobo zihambelane neyona iphambili.
Enkosi ngazo zonke ezi zibonelelo Unako ukulawula ngakumbi i-smart home thanks to the internet. Uya kuhlala kuyo yonke imisebenzi yayo kunye nazo zonke ezi fakelo kunye nezixhobo ezikrelekrele oya kuthi uzihambise kuyo yonke indlu.
I-Amazon Echo Dot, sisixhobo esihle
Sesinye sezixhobo ezifanelekileyo kunye nabancedisi basekhaya baya kwenza ngemiyalelo yelizwi. Baya kunceda ukwenza ezinye iinkalo zobomi bakho zibekezeleke ngakumbi kwaye zenzeke. Esi sixhobo ibandakanya inkumbulo ekrelekrele elawulwa nguAlexia, oya kuthi kule meko usebenze njengomncedisi wakho. UAlexia usisithethi iya kulawula imisebenzi eyahlukeneyo kwaye inike ilizwi ukucacisa imibuzo ethile. Uyilo lwayo lusebenza kakhulu, luncinci kwaye lunemilo yesithethi.
Yenzelwe ukuba isetyenziselwe iiprofayili ezahlukeneyo ngendlela ethile. Umntu ngamnye unokuziqhelanisa nendlela yakhe yesiqhelo. Umncedisi wakho okrelekrele angayiphendula imibuzo, akuxelele iindaba, adlale umculo owuthandayo, akunike uqikelelo lwemozulu, kwaye unokudibanisa nezinye izixhobo ezifanelekileyo ukuze ukwazi ukuzilawula ngokwamanani.
Phakathi kwemisebenzi eyahlukeneyo ekubonelelwa yi-Alexa, ungangena ekhitshini kwaye upheke ecaleni kwayo. Kuya kukunceda njengesibali-xesha, ukwenza uluhlu lokuthenga xa ungaphosanga nakuphi na ukutya kwaye unokukunceda ukuba ubeke enye into endaweni yekhitshi. Kwakhona izokunceda ufumane iresiphi efanelekileyo yomnyhadala, iya kukhangela iresiphi yeveki okanye umntu okanye iphepha elithile.
Ikuvumela ukuba unxibelelane nezixhobo ezifanelekileyo Kwaye nokuba azikho, ungazenza ukuba zivumelane ne-IFTTT, yenye yeendlela zokuqala ze-Alexa.
Ezi ntlobo zezixhobo ziba ngakumbi nangakumbi ngokubaluleka kuluntu lwanamhlanje. Zisezizixhobo ezindala ezifanayo, kodwa ngokukhethekileyo kokulawulwa ngengqondo, ngeWifi kunye neBluetooth.
Iifriji ezikrelekrele Ziqulathe imemori yangaphakathi evumela ukuba uthenge kwifriji ngokwayo. Ungayilawula ngePC, iselfowuni okanye umncedisi othile.
Oomatshini bokuhlamba Smart ziqulathe enye inkqubo efanayo elawula indlela yokwenza imijikelo yakho yokuhlamba. Izokwazisa xa zonke iimpahla zakho zicocekile kwaye zomile.
Izitya zokuhlamba izitya Zizinye zezixhobo eziza kukunceda nge-sensor yakho yesakhono. Baya kulawula inqanaba lokungcola kunye nomsebenzi kwaye baya kwenza olwabo ulawulo lokuhlengahlengisa inkqubo ethile yokwenza ukucoca kwabo.
Ii-oveni ezifanelekileyo: Ungalawula yonke imisebenzi yokubhaka ngesixhobo sakho esiphathwayo. Ungahamba umke ekhaya okanye emsebenzini kwaye ulawule iinkonzo zabo ngaphandle kokubakho.
I-microwave efanelekileyo: Zizixhobo ezixabiseke kakhulu onokuzilawula nangalo ilizwi lakho emntwini, ngaphandle kokusebenzisa nawaphi na amaqhosha.
Zizinto ezincinci eziza kunceda ukwenza ubomi bakho bube ngcono ngakumbi. Ngezi mveliso ungawuphucula umgangatho, intuthuzelo kunye nokhuseleko kwaye wonge kwibhili yakho yombane.
Iiplagi ezifanelekileyo Baza kukuvumela ukuba unike ulwazi oluneenkcukacha malunga nesixa sombane esisetyenziswa sisixhobo. Ngokulawula ilizwi ungalawula ubungakanani bokukhanya okanye uhlengahlengiso ukuba ucime okanye ucime ezi zixhobo.
Iibhalbhu ezilumkileyo Zilawulwa lilizwi kwaye zingakhanyisa ukuya kuthi ga kwimibala ezizigidi ezili-16. Ziyilelwe ukuba zikwazi ukubanikeza ukukhanya kokukhanya okufunekayo ngamaxesha emini oyifunayo. Banokungqamaniswa nemidlalo bhanyabhanya kunye nomculo ukwenza indawo efudumeleyo, eyenzelwe wena.
Smart thermostats: Ziyakwazi ukuziqhelanisa neenkqubo ezininzi zokufudumeza. Baza kukunika ngexesha elifanelekileyo ubushushu begumbi kwaye ngesixhobo onokuthi wenze kuso zonke ezi sensors ukwenza ubushushu kunye nokwenza ubushushu obuyimfuneko.
Iikhamera zokhuseleko: ezinye izixhobo eziza kukunceda ulawule, naphi na, imifanekiso ngexesha lokwenyani lekhaya lakho okanye ishishini.
Izitshixo ezifanelekileyo: Enye into entsha kwisixhobo esisebenza nge-intanethi. Unokwenza isebenze okanye uvimbe iqhaga lakho naphi na apho ukhoyo, ude wenze iikhowudi zokufikelela ukulawula ukufikelela kusapho, kubahlobo okanye kwiindwendwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Izixhobo zasekhaya ezi-Smart
Ungakukhulisa njani ukuzithemba